Lolu hlelo olusukela zingama-23 kuya kuma-30 kuNhlangulana beluhlanganise abafundi abangama-71 abavela emiphakathini entulayo lapho behlomule ngokuthola izifundo ezengeziwe kwezokuhlelwa kwamabhuku ezimali okusezingeni eliphakeme, ukuhlolwa kwamabhuku ezimali okusezingeni eliphakeme, ezokulawulwa kokuhlelwa kwamabhuku ezimali nezokulawulwa kwezezimali kanye nezentela ukuze kuqinisekiswe ukuthi bakulungele ukubhala isivivinyo se-SAICA ITC okuyisinyathelo sokuqala ekubeni yi-CA.
‘Izifundo ze-ABASA/SAICA/UKZN Winter School zifike ngesikhathi esibaluleke kakhulu kubafundi nasezweni jikelele. Lolu hlelo lufike ngesikhathi izwe liphezu kohlelo lokuletha uguquko; nokuqinisekisa ukuthi intsha ihlinzekwa ngamakhono abalulekile kakhulu emkhakheni yezokuhlelwa kwamabhuku ezimali. Ukubonakala kobungxube kubafundi ababuya emiphakathini entulayo okwenziwe yi-ABASA ne-SAICA kumele kushayelwe ihlombe futhi kusetshenziswe njengesisekelo semikhankaso ezayo. Ukungenelela ngaloluhlobo kunesiqiniseko semiphumela emihle,’kusho oyibamba leDini yesikole, uDkt Mabutho Sibanda.
Omele i-ABASA uMnu Mbusiswa Ngcobo uthe: ‘Inhloso enkulu ye-ABASA ibambisene nabanye ababambe iqhaza abambandakanya ne-SAICA, sithemba ukuthi ngalolu hlelo, ukukhuphuka kwezinga lokuphumelela kubafundi abamnyama nabangamakhaladi ezifundweni ze-CTA e-UKZN kuzoba nomthelela omuhle emkhakheni wezokuhlelwa kwamabhuku ezimali esifundeni sethu ukuze sihambelane nomphakathi esiphila kuwo.’
Onguthisha e-SAEF futhi ongumxhumanisi wohlelo i-Thuthuka uDkt Msizi Mkhize uthe lo mkhankaso uhlose ukuthuthukusa amakhono okuqondisisa abafundi.
‘Abaqeqeshi bebegxile emaswini asebenza uma kunokuhlolwa kanye namakhono okufunda. Abafundi bebeqeqeshwa ngezindlela zokulawula isikhathi nokuthola amamaki aphezulu lapho abaqeqeshi bebegcizelela ukubaluleka kokufunda imibuzo kuqala ngaphambi kokubheka izinsiza abazinikeziwe. Le ndlela iqinisekisa ukuthi abafundi bagxila ezimpendulweni ezifanele.'
Umfundi weziqu ze-Onazi uThembeka Bobo uthe ufunde lukhulu kulolu hlelo. ‘Engikuthakasele kakhulu ngalezi zifundo ukuthi sibhala nezivivinyo ukuze sihlole ukuthi siqonda kangakanani esikufundayo,’ kusho uBobo. ‘Lokhu kusinika ithuba lokukala ukuthi sesifunde kangakanani nokuthi kumele siqinise kephi ngoba uma sisuke silalele ofundisayo echaza ekilasini lokho akusho ukuthi siqonda konke okushiwoyo. Ulwazi engiluzuzile selungenze ngazethemba ukuthi ngizophumelela ezifundweni zami,’ usho kanje.